Shiinaha Xirfadleyda Tattoo Kumbiyuutarka Xaraashka ah, Soosaarida mashiinka mashiinka daabaca iyo Warshad | MOLONG
Tattoo Xirfadleyda Xaraashka Tattoo-ga ah, Mashiinka daabacaha wareejinta
Tattoo-ka Mashiinka Wareejinta Kuleylka ah
(1) Qalliinka lacag la'aanta ah ee 'Fuss' wuxuu u shaqeeyaa sida mashiinka fakiska oo kale
(2) Qaybta isafgaradku kama qaadi doonto boos qiimo leh istuudiyahaaga tattoo
(3) Soo gaabi waqtiga ku lumay si toos ah sawirka maqaarka
(4) U oggolow inaad hesho sawir aan la kala qaybin, oo saf ah, oo cajiib ah
(5) Tattoo-kaaga ka dhigo mid waxtar badan
(6) USB waa la jaan qaadayaa, wuxuu daabacan karaa sawirada iyo nuqulada ku keydsan kombuyutarkaaga
(7) Si fudud loo qaato, miisaan fudud, qiimo wanaagsan, tayo sare leh
(8) Kayd buuxa markasta
1.Portable than any of the copiers copy.Is miisaan kayar laakiin isku shaqo.
2.Waxay la jaanqaadeen adabtarada ku habboon soo gelinta 100-240V .Dhammaan hoggaaminta awoodda dhammaan waddammada.
3. La jaan qaada PC.
4.Durable oo sahlan in la ilaaliyo.
1 x Mashiinka wareejinta
1 x Buug gacmeed Ingiriisi ah
1 x Xarig koronto
Tiradda ka Weyn, Qiimaha Hoose !!!!!
Ballaadhinta Wax ku oolka ah: 210 mm
Cabbirka dukumintiga: A5-A4
Dhumucda Dukumintiga: 0.06 mm-0.15mm
Awooda: AC 110V-220V; 50Hz / 0.46A
Caadi ah: Kala beddelka u dhexeeya noocyada iftiinka xaaladda iftiinka. Marka shaqada koobiga caadiga ahi bilaabato, iftiinka caadiga ahi wuu shaqeeyaa.
Qoto Dheer 1: Si loo dejiyo dukumiintiyada la soo guuriyey ee qoto dheer 1. Marka qoto dheerida 1 ay shaqeyso, qoto dheerida 2 ayaa baxeysa
Qoto dheer 2: in lagu dejiyo dukumiintiyada la soo guuriyey ee qoto dheer 2. Marka qoto dheerida 2 ay shaqeyso, qoto dheerida 1 ayaa baxeysa.
Nuqul: Si aad u bilowdo shaqada nuqul.
Jooji: Si loo joojiyo shaqada nuqul ..
Awood: Iftiinka ayaa tilmaamaya in mashiinka loo diyaariyey inuu shaqeeyo.
Khalad: Iftiinka ayaa ah in la muujiyo wax qalad ah oo ka dhacay mashiinka. Marka TPH uu kululaado, ileysku wuu socdaa.
1. Haddii aad rabto inaad joojiso hawsha nuqul, fadlan taabo furaha "JOOJI".
2. Haddii dhawaaqa digniintu dhawaaqo, nalalka QALADKA ayaa shaqeynaya oo joojiya nuqul si aan bislaanayn;
Tattoo Thermal Copier wuxuu u oggolaanayaa farshaxanka tattoo ama xirfadlaha inuu nuqulo naqshadaha ku dhejiyo warqadda stencil si dhakhso leh oo wax ku ool ah dhawr tallaabo oo fudud.
Copier-ka Kaamerada Kaamerada Tattoo-ka ah wuxuu culeyskiisu yahay 1.6 kg / 3.5 lb, Waa fudeyd iyo mid yar sidaa darteed waa ku habboon tahay in la qaado. Compact ku filan oo ku habboon meel kasta. Waad sameyn kartaa abuurista tattoo markasta iyo meel kasta oo aad jeceshahay
Daabacaha tattoo wuxuu leeyahay xawaare daabacan xawaareyn kala iibsiga, kuleyl yar, buuq yar iyo waxqabad deggan. Cabirka Wareejinta La Iswaafajin Karo: Qiyaastii 8.5 inji x 11 inji (W * L). La jaan qaada danab ee 100-240v, way kuu shaqeyn kartaa adiga aduunka oo dhan
Daabacahan miisaanka culus oo si dhaqso leh ayaa loo dhaqaajin karaa oo u fududaan karaa keydkiisa, wuxuu ku siinayaa sahlanaan dheeraad ah Waad sameyn kartaa abuurista tattoo markasta iyo meel kasta oo aad jeceshahay.
Ka samaysan maadada ABS, oo ah mid deegaan, ammaan iyo adkeysi u leh isticmaalka muddada-dheer. Mashiinka Tattoo Tirada badan ee loogu talagalay farshaxanada tattoo Fudud in lagu shaqeeyo. Maya hagaajin loo baahan yahay iyo waqti badbaadin.
Hore: 32mm MO Qarxiye birta ahama birta qabato Tattoo Qabsashada for Tattoo irbadaha Cartridges
Xiga: Mashiinka Mashiinka Tattoo Copper Mashiinka Qoryaha Mashiinka Tattoo ee Gacmeed Nadiif ah
Qabashada Tattoo Aluminium
12 kumbiyuutarada Xidhmada Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Dhagaha ee Nav Nav ...
Qalink Tattoo batari Style Lithium cusub
Tattoo-ka La-Tuuri Karo Oo La-Qaado 25MM Oo La ...